» ONLF oo la sheegay in wada hadal lala galayo iyo Ethiopia oo hadashay
ONLF oo la sheegay in wada hadal lala galayo iyo Ethiopia oo hadashay
Dec 12, 2012 - 1 Jawaab	Ra’iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Heila Marian Dieseling ayaa sheegay in Dowladda Ethiopia ay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho jabhada ONLF ee dagaalka kala soo horjeeda.
Wuxuu sheegay Ra’iisul Wasaaraha dalka Ethiopia inay diyaar u yihiin inay la hadlaan Jabhada ONLF ee Ogdania.
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay si meesha looga saaro dagaalada udhaxeeya ONLF iyo Ethiopia muhiim inay tahay in wadahadal la galo.
Wuxuu tilmaamay inay wanaagsan tahay in wax waliba wada hadal lagu dhameeyo si meesha looga saaro dagaalka islamarkaana lawada sugayo natiijada wada hadalka wixii kasoo baxa.
ONLF iyo Dowladda Ethiopia ayaa muddo ku dagaalamaye meelo kala duwan oo kamid ah dalka Soomaaliya iyo dhulka Dowladda deegaan Soomaalida kilinka Shanaad.
« Warbixinta Ka HoreysayJawiga Magaalada Jowhar sida uu yahay iyo wararkii ugu dambeeyay la soco	Warbixinta Xigto »Ahlu sunna oo ciidamada qabsaday Jowhar u sheegtay inuu horyaalo waajibaad kale	One Response to ONLF oo la sheegay in wada hadal lala galayo iyo Ethiopia oo hadashay
Ismacil says:	December 13, 2012 at 9:30 am	Wan kaxumahey wada hadalka onlf lagalessa maxa yeley dowladda itobia marwaliba wa cadawga somaliya ha ogadan tass wana ogadigayya haddey laheshisso ma waxey ka amar qadanayan itobia wa yab ?